San Htun's Diary: June 2014
ပိတ်ရက်တွေဆို လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာ ၁ လလောက် ရှိပါပြီ။ မဖြစ်မနေ သွားရမဲ့ကိစ္စ၊ စာမေးပွဲရှိမှသာ မလျှောက်ဖြစ်တာ။ ဂျွှန်လရဲ့ပထမပတ် စနေနေ့ မှာတော့ ရုစဗဲ့ကျွှန်း၊ နာဂိုချီပြတိုက်ဆီ လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။ Meetup ဆိုဒ်မှာ နယူးယောက်လမ်းလျှောက်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ကို မန်ဘာဝင်ထားတာမှာ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးအဖွဲ့ က NYC walks : Nature, beauty & peace ဆိုတဲ့အဖွဲ့ လေးပါ။ အော်ဂနိုက်ဇာ ရွန်က သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို စာရွက်လေးနဲ့ပရင့်ထုတ်လာပြီး ရှင်းပြတယ်။ မန်ဘာတွေကလည်း ဖော်ရွေကြတယ်။ ရုစဗဲ့ကျွှန်းလေးက မက်ဟန်တန်နဲ့ကွင်းကြားမှာရှိတဲ့ ကျွှန်းသေးသေးလေး။ ရထားနဲ့နေတိုင်းဖြတ်သွားပေမဲ့ တခေါက်မှ မရောက်ဖြစ်ဘူးရယ်။ စုရပ် Tramway Plaza မှာ သတ်မှတ်ချိန် နေ့ လည် ၁၂ နာရီ မှာ ဆုံကြပြီး အော်ဂနိုက်ဇာ ရွန်က နောက်ကျတဲ့သူတွေကို စောင့်နေချိန်မှာ ကျွန်မတို့ က Tram စီးပြီး ရုစဗဲ့ကျွှန်းလေးဆီ ချီတက်ကြတယ်။ Tam စီးခက နယူးယောက်မြေအောက်ရထားလက်မှတ် MetroCard နဲ့ပေးရပါတယ်။
Tram from Manhattan to Roosevelt Island
East River ကို ဖြတ်ကျော်တော့ ဟောင်ကောင် Lantau ကျွှန်း Giant Buddha ဆီ ကောင်းကင်ကေဘယ်ကား စီးရတာကို သတိရမိတယ်။ Tram သာ ဆိုတယ် ကေဘယ်ကား စီးရသလိုမျိုးပါလား။ ဟောင်ကောင် Peak Tram ကမှ ၆၀ ဒီဂရီ မတ်မတ်ကြီးကို မောင်းတက်သွားတာများ တကယ့်ကို ရင်တုန်းပန်းတုန်။ ဒီထရမ်ကတော့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး။ အဲဒီနေ့ က လမ်းလျှောက်တဲ့သူ ၄၅ ယောက် ရှိတယ်။ နာမည်ကျော်အာခိတက် Louis Kahn တည်ဆောက်ထားတဲ့ Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park ကို သွားလည်ကြတယ်။ မက်ဟန်တန်ဖက်ခြမ်းက UN ရုံး၊ အင်ပါရာစတိတ် အဆောက်အဦး၊ တဝီဝီမြည်နေတဲ့ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ၊ အပျော်စီးသင်္ဘော၊ ကုန်တင်သင်္ဘော၊ စပိဘုတ်တွေကို တွေ့ ရတယ်။ ရေလည်ခေါင်က ကျွှန်းသေးသေးလေးမှာ ငှက်ကလေးတွေ အနားယူနေကြတယ်။
Left side is Manhattan & right side is Roosevelt Island
ကျွန်မနဲ့အဖွဲ့ ကြသွားတာက သူ့ မိဘတွေက အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း မက်ဒရပ်ကပေမဲ့ သူကတော့ စတိတ်မှာမွေး၊ စတိတ်မှာ ကြီးပြင်းတဲ့ အိန္ဒိယသူလေး ဘဂျီနီ။ အုပ်စုထဲမှာ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပါလို့မေးကြည့်တော့ တနေကုန် ကွန်ပျူတာ၊ တီဗွီရှေ့ မှာ အချိန်ကုန်နေတာ မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကို ရောက်ဖူးအောင်၊ လမ်းလည်းလျှောက်ဖြစ်အောင် ခေါ်လာတာတဲ့။ ခေါ်လာတဲ့ မိဘကိုရော၊ လိုက်ချင်တဲ့ ကလေးကိုရော ချီးကျူးမိပါရဲ့ ။ သူ့ မိဘတွေနဲ့တောင်တက်၊ Trail တွေမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်နေကြမို့သူ့ အတွက် မစိမ်းပါဘူးတဲ့။
စိန့် ပက်ထရစ်ကသီထရယ် ဘုရာရှိခိုးကျောင်းရဲ့ဒီဇိုင်နာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Smallpox ဆေးရုံအပျက်အစီးတွေက သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါသတဲ့။ ရွန်က စာရွက်ကိုင်ပြီး သမိုင်းကြောင်းကို ပြောပြ၊ ရှေးမှီနောက်မှီ လူကြီးတွေက ပြောပြနဲ့အတော်ဗဟုသုတရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေလို့နောက်နားရောက်သွားရင် ရွန် ရှင်းပြတာ မကြားရတော့ နောက်ဆို ရွန်နဲ့ ထပ်ချပ်မခွာ သုံးလှမ်းထက် ပိုမဝေးစေနဲ့ လို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ လောင်းအိုင်လန်စီးတီး open studios ပြတိုက်တွေကို ဒီအဖွဲ့ နဲ့ပထမဆုံးသွားတုန်းက ဒါ meetup အဖွဲ့ လားလို့သွားမေးတဲ့ အန်ကယ်ကြီးနဲ့ပြန်ဆုံလို့သွားနှုတ်ဆက်တော့ တွေ့ လား အဲဒီအပင်တွေ အားလုံးက ချယ်ရီတွေ၊ ဧပရယ်ဆို လှိုင်လှိုင်ပွင့်တာ။ ဘရွတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းမှာလည်း ပွင့်တယ်။ ဒီအဖွဲ့ တောင် သွားသေးတယ် မင်း မလိုက်ဘူးလား။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မက ဒီအဖွဲ့ ကို မသိသေးဘူး တခြားအဖွဲ့ တွေနဲ့လမ်းလျှောက်နေတာ။
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park designed by Louis Kahn
ရွန်က နာမည်ကြီး တော်တော်ကောင်းတဲ့ အော်ဂနိုက်ဇာကွ။ ငါဆို သူနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာ နှစ်ပေါက်နေပြီ။ နေ့ လည်စာစားတော့ St. John Divine Catheral ကို သွားလည်ဖို့စီစဉ်တာ ဘုရားကျောင်းက အီးမေးလ်မပြန်လို့မသွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ စလို့ရွန်နဲ့ကျွန်မ စကားလက်ဆုံကျပါတယ်။ သူ ရောက်ဖူးတဲ့ အထဲမှာ ပြင်သစ်က Notre Dame Catehral ဘုရားကျောင်းက အလှဆုံးပါတဲ့။ အီတလီ ဗာတီကန်နန်းတော်ကိုများ ရောက်ဖူးလားမေးတော့ သူတို့ တွေက အရမ်းချမ်းသာတာတဲ့။ ဘာလို့ဘုရားကျောင်းတွေက ဒီလောက်ချမ်းသာနေတာလဲ မသိဘူး။ အရင်တုန်းကဆို စစ်တပ်တောင် ရှိတာတဲ့။ မင်း ဘာဘာသာဝင်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့ သူက အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ရှိတယ်ဆိုတော့ ထေရဝါဒနဲ့မဟာယနလားတဲ့။
တရားထိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောကြတော့ သူက နေ့ တိုင်း တရားထိုင်တယ်တဲ့။ တရားမထိုင်တဲ့နေ့ ဟာ သူ့ အတွက် မပြည့်စုံ တခုခု လိုနေသလိုပဲတဲ့။ ကျွန်မကတော့ နာသီးဝကိုတောင် မနည်းမှတ်နေရတယ်ဆိုတော့ စိတ်ကိုချုပ်မနေထားတဲ့ လွှင့်နေရင် ပြန်ဆွဲယူနဲ့တရားပြသွားသေးတယ်။ တရားဘယ်လို ထိုင်သလဲဆိုတော့ အိပ်ရင်း တရားထိုင်တာတဲ့။ ကျွန်မဆို တင်ပျင်ခွေထိုပြီး တရားထိုင်တာတောင် အိပ်ငို်က်တာ အိပ်ရင်း တရားထိုင်လို့ ကတော့ အိုး...ဘာပြောကောင်းမလဲ တခါတည်း အိပ်ပျော်သွားမှာ။ ဆရာတော်ဦးဇောတိက စာအုပ်ထဲမှာ ကားမောင်းနေရင်း၊ အိပ်သာတက်ရင်း၊ ချက်ပြုတ်ရင်း လှုပ်ရှားမူလေးတွေ သိနေတာလည်း တရားထိုင်တာပါပဲတဲ့။ ရုစဗဲ့ ကျွှန်းမှာ ကွင်းဖက်ခြမ်းဆို မက်ဟန်တန်ဖက်ခြမ်းနဲ့ခြားနားစွာ တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ။ ဖာရီယာဆိုတဲ့ နယူးဂျာဆီသူလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ နဲ့ပထမဆုံး လမ်းလျှောက်တာပါတဲ့။ နယူးဂျာဆီက လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ တွေဆို မနက် ၇ နာရီကနေစပြီး ၁၂ မိုင် လမ်းလျှောက်ကြတာတဲ့။ ဟယ်မလေး အဲဒီလိုမျိုးတော့ မလျှောက်နိုင်ပေါင်။ ခရစ်၊ ရို့ စ်မယ်ရီတို့ နဲ့သိကျွှမ်းရတယ်။
UN Building & Me
ရုစဗဲ့ကျွှန်းမှာ လူနေအိမ်တွေ ရှိပါတယ်။ တံတားဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့မက်ဟန်တန်ကို ငါးမိနစ်အတွင်းရောက်တော့ အိမ်လခ ဈေးကြီးတယ်။ ကွင်းဖက်ကို ဘတ်စ်ကားရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်ဆောက်ဖို့လျာထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ ကျွှန်းသေးသေးလေးဆိုပေမဲ့ မက်ဟန်တန်၊ ပင်လယ်၊ ညနေတိုင်း၊ ပိတ်ရက်တွေဆို အပြေးလေ့ကျင့်၊ စက်ဘီးစီးနိုင်တဲ့ ပန်းခြံလေးတွေနဲ့သာယာသား။ ရုစဗဲ့တံတားကို ဖြတ်ကျော်တော့ ကလေးအမေက ဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့လာမေးလို့မြန်မာနိုင်ငံကလို့ဖြေတော့ အို မိုင်ဂါ့ ဘုရားရေ မင်း ဘယ်လိုလုပ် ရောက်လာတာလဲ... မင်း မိဘတွေ အခြေအနေ ကောင်းရဲ့ လား...မင်းတို့ အစိုးရက တအားဆိုးတယ်နော်...။ မြန်မာပြည်အကြောင်း ဘယ်လိုသိတာလဲမေးတော့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အမေရိကန်တွေ မင်းတို့ မြန်မာပြည်အကြောင်း သိတယ်ကွ။ အိုဘားမားဆို ခဏခဏ မြန်မာပြည်အကြောင်း ထည့်ပြောတာ။
အက်စတိုးရီးယားက နာမည်ကျော် ဂျပန် - အမေရိကန် ပန်းပု၊ လန်းစကေ့ဒီဇိုင်နာ Isamu Noguchhi ပြတိုက်ကို သွားလည်ကြတယ်။ ကျောင်းသားဆို ဒစ်စကောင့်ရပေမဲ့ အဲဒီနေ့ က ကျောင်းသားကဒ် မပါခဲ့ဘူး။ လူရုပ်တုတွေလောက်ပဲသိတဲ့ ကျွန်မကတော့ နာဂူချီရဲ့လက်ရာတွေကို နားမလည်ဘူး။ သူ့ ရဲ့လန်းစကေ့ရေပန်းဒီဇိုင်းတွေက နာမည်ကြီးဆိုပဲ။ အမေရိကန်တွေ တော်တော်လေးစားကြတယ်။ ဂျပန်အနုပညာလက်ရာဟန်အတိုင်း ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးတွေ။ Socrates Sculpture Park မှာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်စွမ်းပြထားတွေကို တွေ့ ပေမဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ National Gallery of Art က ပန်းချီ၊ ပန်းပုတွေလောက် ကျွန်မ အကြိုက်မတွေ့ ဘူး။ နေ့ လည် ၁၂ နာရီကတည်းက လျှောက်လိုက်တာ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ၄ မိုင် ခရီးပေါက်တယ်။ ကယ်လိုရီ ၃၀၀ ကနေ ၅၀၀ လောက် လောင်သွားတယ်ထင်ပါ့။
Ron explained the sculptors are famous but I don't remember that.
ဗိုက်ဆာလာတာမို့လမ်းထိပ်ယူနန်ဆိုင်က ကြက်ကြော်တခြမ်းဆွဲကာ အိမ်ပြန်တယ်။ ကျွှေးသမျှ အကုန်စားတဲ့ နတ်ဆုလို့အမည်တွင်တဲ့ခွေးကို ကြက်အရေခွံ၊ အရိုး ကျွှေးတာ အစအနတောင် မမြင်ရဘူး။ မိုချီလို့အမည်တွင်တဲ့ ကြောင်ကတော့ စားရင်လာမျှော် ကျွှေးရင်လည်း မစား။ အဲ ကြက်ကြော်တော့ နည်းနည်းစားတယ်။ မိုချီက သူ့cat food ပဲ စားတယ်။ လမ်း ၅ နာရီလျှောက်လို့ကယ်လိုရီ ၅၀၀ လောက် လောင်ကျွှမ်းသွားတာကို ကြက်ကြော် ကယ်လိုရီ ၇၀၀ လောက် ပြန်တီးတယ်။ သူ မစားချင်တဲ့ အစားအသောက်တွေဆို ကယ်လိုရီအကြောင်းပြပြီး ငြင်းဆန်တတ်တဲ့ ရာမားကို ကျွန်မတို့ခနဲ့ ကြတာက ညည်း အမေရိကန် သိပ်ဆန်နေပါလား။ အမေရိကန်တွေ ကယ်လိုရီ သိပ်တွက်တာပဲ အဲ သူတို့ ကြိုက်တဲ့ Fast Food တွေကျတော့ ကယ်လိုရီ မတွက်တော့ဘူး။
My favorite one in The Noguchi Museum
Summer is awesome. :)
ဘရောင်းဇ် Bronx က နာမည်ကျော် နယူးယောက်ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းကို နောင်တပတ် စနေနေ့ မှ သွားလည်ရအောင်။
ဂျွှန် ၂၉ ၊ ၂၀၁၄။
Reference : http://www.meetup.com/NYC-walks-Nature-beauty-peace/events/186927932/
တချိန်တုန်းက ကျွန်တော် အရမ်းလိုချင်ခဲ့တဲ့ နာရီ...
ခုတော့ ကျွန်တော် အမုန်းဆုံးနာရီ...
ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာဆိုရင် နာရီမလိုဘူးဗျ။ ရွာသေးသေးလေးဆိုတော့ အချိန်းအချက်လုပ်ပြီးမှ သွားစရာမလို။ ကိစ္စရှိရင် သူ့ အိမ်ကို ဒါမှမဟုတ် ဒီအချိန် သူ ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေမလဲလို့ခန့် မှန်းပြီး သွားလိုက်တာပဲ။ ရွာသားတွေ ဆုံရပ်ဆိုတာကလည်း ညနေမြို့ သင်္ဘော ဝင်လာရင် လက်ဖက်ရည်မှာမသောက်ဘဲ အလကားရတဲ့ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပြီး လေပန်းကြတဲ့ ဆရာလေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ညနေဆိုရင် စည်ကားတတ်တဲ့ ကိုချက်ကြီး အရက်ဆိုင်၊ ရွာထိပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲ ရှိတယ်။ ဒီနေရာတွေမှာ မတွေ့ လို့ ကတော့ လမ်းမှာတွေ့ တဲ့ လူတယောက်ကို လှမ်းမေးလိုက်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ဘယ်မှာတွေ့ ခဲ့တုန်း တွေ့ ရင် ဘယ်မှာ စောင့်နေတယ်လို့ လူကြုံပါးလိုက်တာပဲ။
မြို့ မှာ အထက်တန်းကျောင်း သွားတက်တော့ နာရီလိုလာတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ဘယ်မှာစောင့်နေတယ်လို့လူကြုံပါးလို့ မရတော့ဘူး။ ကျောင်း၊ ကျူရှင် အချိန်မှီ ရောက်ဖို့ ၊ ချိန်းထားတာတွေ နောက်မကျစေဖို့ ၊ အချိန်နဲ့ အညီ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရတဲ့မြို့ ကိုရောက်တော့ အဖေက ကျွန်တော့်ကို နာရီတစ်လုံး ဝယ်ပေးတယ်။ စတီးကြိုးပြား၊ ဒိုင်ခွက်အဝိုင်းလေးနဲ့ စင်တီဇင်နာရီလေးကို ကျွန်တော် သိပ်သဘောကျတာပဲ။ အပြင်သွားစရာရှိရင် အဲဒီနာရီလေးမပါဘဲ မသွားဘူး။ နှုတ်ခမ်းနီအမြဲဆိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ နှုတ်ခမ်းနီ မဆိုးထားတဲ့နေ့ ဆိုရင် နေမကောင်း ဖြစ်နေသလို၊ ဖြူပတ်ဖြူလျော် ဖြစ်နေသလို၊ တခုခုလိုနေတယ် ခံစားရသလို နာရီမေ့ပြီး မပတ်သွားတဲ့နေ့ တွေဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း တခုခုလိုနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ဓာတ်ခဲအသစ်လဲလိုက်၊ စက်ရပ်သွားရင် နာရီပြင်ဆိုင်ပို့ လိုက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက နာရီအသစ်လဲဖို့ ၊ အဖိုးနှုန်းသင့်တဲ့ နာရီလေးတွေ၊ ဈေးမှန်ပစ္စည်းမှန်တဲ့ နာရီဆိုင်တွေ၊ အသစ်မဝယ်ချင်ရင်လည်း တပတ်နွမ်းနာရီလေးတွေ ရတတ်တဲ့နေရာတွေကို ညွန်တတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အဲဒီနာရီလေးကို တန်ဖိုးထားနေတာ။ မြို့ ကျောင်းတက်တော့ အမှတ်တရ အဖေ ဝယ်ပေးတဲ့ နာရီလေးကိုး။ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ချစ်သူက နာရီလက်ဆောင်ပေးတော့မှပဲ အဲဒီနာရီလေးနဲ့အပြီးအပိုင် လမ်းခွဲတော့တယ်။ မခွဲလို့ လည်း မရတော့ဘူးဗျ နာရီပြင်ဆရာကတောင် တန်ဖိုးထက် လက်ခများတော့မယ် အသစ်ဝယ်တော့ ငါ့အသိဆိုင်တွေ ညွှန်ပေးမယ်လို့ပြောလာပြီကိုး။
အဲဒီနာရီလေးကို အံဆွဲထဲမှာ သိမ်းလိုက်ပြီး ချစ်သူပေးတဲ့ သားရေကြိုး၊ ဒိုင်ခွက်ပြားပြားလေးနဲ့ဆီကုိုတံဆိပ် နာရီလေးကို ပတ်တော့တယ်။ စတီးကြိုးလို မလေးတော့ ပေါ့ပေါးပါးပါး ရှိတာကို ကြိုက်တယ်။ အားနည်းချက်က စတီးကြိုးလို တာရှည်မခံဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကလည်း သားရေကြိုးများ ကိုက်စားပစ်လား ထင်ရအောင် သားရေကြိုး ခဏခဏ လဲရတယ်။ မွေးနေ့ လက်ဆောင် နာရီသားရေကြိုး ပြတ်သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့အချစ်ဇာတ်လမ်းလည်း ပြတ်လိုက်၊ ပြန်တပ်လိုက်။ လူတိုင်းနိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော် မပါဘူးလေ။ ရထားတဲ့ဘွဲ့ နဲ့အလုပ်ရှာရခက်တော့ သင်တန်းတွေတက်ရင်း အလုပ်တခုရဖို့အသည်းအသန် ရှာနေချိန်ပေါ့။ ချစ်ပေမဲ့ မကြီးပွားမတိုးတက်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချစ်သူက အားမရဘူးတဲ့။ ချစ်သူ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကတည်းက ကျွန်တော် တွေးမိပါတယ်။ သူ့ နောက်လည်း ကျွန်တော် မလိုက်နိုင်၊ ကျွန်တော့်နားလည်း သူမနေနိုင်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးကြလိမ့်မယ်လို့ ။
ချစ်သူပါတဲ့လေယာဉ် ဟိုးအဝေးကြီးကို ထွက်ခွာသွားတော့ ကျွန်တော့်အသည်းနှလုံးတွေ ကွဲကြေသွားတော့တာပဲ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းချစ်သူတွေ။ တိုးတက်ကြီးပွားချင်တဲ့သူက ကျွန်တော့်ကို ကြိုးစားဖို့ ၊ သင်တန်းတွေတက်ဖို့နားပူနားဆာတိုက်တွန်းလို့ကျွန်တော် ပြုံးနေရင် သူ ဒေါပွပုံလေးက တကယ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာဗျ။ ခွဲခွာကာစတုန်းက ဟာတာတာနဲ့အတော်နေလို့မကောင်းတာ။ သူကတော့ ကျောင်းသင်ခန်းစာ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော့်ကို သတိရဖို့နေနေသာသာ ပင်ပန်းလွန်းလို့ရထား၊ ကားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်တယ်တဲ့။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့တခြမ်းစီမှာ ရှိနေတော့ အချိန်မတူ၊ အွန်လိုင်းမလာလို့ ဒေါသထွက်နေရင်းက သူ့ ကို သနားသွားတယ်။ သူ အားတဲ့အချိန် ကျွန်တော် မအား၊ သူ အားတဲ့အချိန် ကျွန်တော် မအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြိုးတွေ လျော့လာတယ်။ သူက လမ်းခွဲချင်ပါတယ်လို့တောင်းဆိုလာချိန်က ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားတာတက် နောက်ကျနေတယ်။
အသိတွေ၊ အကပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်း ရုံးစာရေး အလုပ်ကလေးရဖို့အသည်းအသန် ကြိုးစားရတယ်။ အလုပ် ၁၀ နေရာဆိုရင် လျှောက်ကြတာက ၁၀၀၀၊ အင်တာဗျူးဆိုရင် ကျွန်တော့်ထက် ဘွဲ့ လက်မှတ်၊ ဒီဂရီ ရထားသူတွေချည်းပဲ။ ကံကောင်းလို့ဒီအလုပ်လေးရတာ။ ကျွန်တော်လည်း အရင်လို နာရီအမြဲမပတ်တော့ဘူး ဖုန်းမှာ ကြည့်လို့ရတာကိုး။ ဒီလိုနဲ့နာရီကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေရာက နာရီခရေဇီ ဖြစ်သွားရတာက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလက်က နာရီကြောင့်ဗျ။ ကျွန်တော် မြို့ ကျောင်းပြောင်းလာတော့ သူနဲ့စသိတာ။ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုဆိုတော့ သုံးနိုင်၊ ဖြုန်းနိုင်၊ ကြွားနိုင်တဲ့သူကို တခြားသူငယ်ချင်းတွေက အမြင်ကပ်ကြပေမဲ့ စရိုက်တူလို့ လားတော့ မသိဘူး သူနဲ့ ကျွန်တော် အတော်တွဲမိသား။ သူ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာခါက သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံကြ၊ စားကြ၊ သောက်ကြ၊ ကဲကြတော့ သတိထားမိတာက သူ့ လက်က နာရီဗျ လှလိုက်တာဗျာ။ ဒီလောက်လှတဲ့ နာရီမျိုး မမြင်ဘူးပေါင်။ မေးကြည့်တော့ ရိုးလက်ဇ်နာရီတဲ့။ ဝထ္ထုတွေထဲမှာ ရိုးလက်ဇ်နာရီလို့သိထားတာ ခုမှပဲ သေချာမြင်ဖူးတော့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ရိုးလက်ဇ်ရောဂါ စွဲတော့တာပဲဗျို့ ။ နာရီဆိုရင် ရိုးလက်ဇ်မှပဲ ပတ်ချင်တော့တယ်။
အဲ ရိုးလက်ဇ်နာရီနဲ့ တူတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်သွားတယ်။ ရိုးလက်ဇ်မလေးဆိုလို့အဲဒီမိန်းကလေးက ရိုးလက်ဇ်နာရီ မဝတ်ထားဘူးဗျ။ ဘာနာရီမှကို မဝတ်ထားတာ။ ရိုးလက်ဇ်နာရီလို တမူထူးခြားတဲ့ ရုပ်ကလေးနဲ့အဝတ်အစား၊ အနေအထိုင် အထက်တန်းကျတယ်။ သူ့ နာမည်လည်း ကျွန်တော် မသိတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ရိုးလက်ဇ်နာရီကို ဖျပ်ခနဲသတိရပြီး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ရိုးလက်ဇ်နာရီမလေးလို့တိတ်တိတ်လေး နာမည်ပေးထားတာ။ ရိုးလက်ဇ်နဲ့ကျွန်တော် စတွေ့ တာ တခုသော နွေရက်မနက်ခင်းမှာပေါ့။ ဘူတာကြီးဘေး ကားပါးကင်ဝင်းကနေ ဘူတာကြီးဆီရောက်တဲ့ ဖြတ်လမ်းလေးကို လူတော်တော်များများ မသိကြဘူး။ အဲဒီဖြတ်လမ်းလေးကို အသုံးပြုတဲ့သူ တော်တော်နည်းတယ်။ မနက်တိုင်း ရုံးဆီလာတော့ စာအိတ်တွေကို သွားထုတ်ချိန် ရိုးလက်ဇ်နဲ့ဆုံတတ်တယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို သတိထားမိပုံ မပေါ်ဘူး ရုံးနောက်ကျမှာစိုးလို့သုတ်သုတ်ပြေးနေတာကိုး။
တခါတုန်းက ရိုးလက်ဇ်က အဆောက်အဦးထဲကအထွက် ကျွန်တော်က အဝင် တိုက်မိမလိုဖြစ်လို့ရိုးလက်ဇ် လန့် အော်သေးတယ်။ ဆော်ရီးလို့ ပြောပြီး ထုံးစံအတိုင်း သုတ်သုတ်ပြေးတော့တာပဲ။ ရိုးလက်ဇ်ကနေ သုတ်သုတ်လို့နာမည်ပြောင်းရတော့မယ် ထင်တယ်။ သူတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ခုန်လို့ ။ အနီးကပ် တွေ့ လိုက်ရတော့မှ မျက်ခုံးထူထူတန်းတန်း၊ မျက်လုံးနက်နက်ဝိုင်းဝိုင်း၊ မေးစေ့ချွှန်ချွှန်၊ ဆံပင်နက်နက်စင်းစင်းလေးတွေနဲ့အတော်လှတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ My Sassy Girl ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသမီးနဲ့တူတယ်။ အဲဒီ်လမ်းကြားကလေးကနေ ရိုးလက်ဇ် ဖြတ်သွားတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့အဲဒီနားတဝိုက်မှာ ကျွန်တော် ရှိနေတတ်တယ်။ ရုံးဝတ်စုံ အမြဲဝတ်တတ်ပေမဲ့ တခါတလေ ဒိတ်များရှိလား မသိဘူး ဂါဝန်တွေဘာတွေနဲ့တခြားနေ့ တွေထက် ပိုလှနေတတ်တယ်။ အဲ ဒါနဲ့မလိုက်ဖက်တာက ကျောပိုးအိတ်။ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ဘေးလွယ်အိတ်နဲ့ သာဆိုရင် ပိုပြီးဖက်ရှင်ကျမလားဘဲ။ ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးအလုပ်တွေ သယ်ရတာနဲ့တူပါနဲ့ ။ အဲဒီကျောပိုးအိတ်လေး ကူသယ်ပေးချင်လိုက်တာ။ သောကြာနေ့ ဆိုရင် ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ All stars ဖိနပ်နဲ့မြီးကောင်ပေါက်မလေးလို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေပြန်တယ်။
သူကပဲ သတိမထားမိတာလား၊ တိတ်တိတ်ကလေး စောင့်ကြည့်ရတာကိုပဲ ကျွန်တော်က နှစ်သက်လေတာလား၊ ဒီထက်ပိုပြီး သိကျွှမ်းရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကပဲ အားမထုတ်လေတာလား မသိ။ နှစ်လ၊ သုံးလ ကြာတဲ့အထိ တိတ်တိတ်လေး စောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်ကနေ တိုးမလာခဲ့။ အချိန်တွေ ကြာလာတဲ့အမျှ ကျွန်တော့် ရိုးလက်ဇ်ဝေဒနာလည်း တိုးလာခဲ့တယ်။ သူ့ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ၊ ဘယ်မှာနေတာလဲ၊ ဘာတွေကို စိတ်ဝင်စားလဲ၊ ဘယ်လို သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသလဲ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လိုကြီးပြင်းခဲ့လဲ၊ ဘာအစားအစာတွေ ကြိုက်သလဲ၊ ဘာသီချင်းတွေ ကြိုက်သလဲ၊ ဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်သလဲ။ သူနဲ့ပက်သတ်လို့အို...ကျွန်တော် သိချင်တာတွေ အများကြီး။
သူနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူတွေဖြစ်ရင် တခြားချစ်သူစုံတွဲတွေလို အင်္ကျီဆင်တူ၊ နာရီဆင်တူဝတ်မယ်။ တယောက်ကိုတယောက် ခွံ့ ကျွှေးမယ်။ တညလုံး မအိပ်ဘဲ ဖုန်းပြောမယ်။ တခုတည်းသော ကျွန်တော် ချက်တတ်တဲ့ အီတလီပါစတာ သူ့ ကို ချက်ကျွှေးမယ်။ ရန်ဖြစ်ကြ၊ စိတ်ကောက်ကြမယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ပြတုိုက်၊ ပန်းခြံ၊ ဘုရားအတူတူ တက်မယ်။ ရေကန်ဘေးနားမှာ ပစ်ကနစ်ထွက်ရင် ကျွန်တော်က ငါးမျှား၊ သူက စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့အေးအေးလူလူ အနားယူ။ တောင်အမြင့်တွေ တက်တဲ့အခါ သူ့ အတွက် လက်ကိုကမ်းလင့်ကို ဖေးမတွဲခေါ်ယူ။ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၊ ရေကန်ဘေး၊ သစ်တောအုပ်လေးထဲ သူ့ လက်ကလေး ဆွဲကိုင်လို့အတူတူ လမ်းလျှောက်မယ်။ သီချင်းတွေ အတူတူနားထောင်၊ စာအုပ်အတူတူဖတ်၊ ဘောလုံးပွဲ၊ ရုပ်ရှင် အတူတူကြည့်။ သူနဲ့ တူတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်နဲ့ တူတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်မွေးပြီး ဆံတွေဖြူသွားကျိုးတဲ့အထိ အတူတူ အိုမင်းချင်တယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ၊ ဟော့ဒီရင်ဘတ်ထဲက အချစ်တွေကို ရိုးလက်ဇ်လေး သိမှသိပါလေစ။
အရင်တုန်းက ပိတ်ရက်တွေဆို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ ဂိမ်းကစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်၊ စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်၊ နှပ်လိုက်၊ ဘောလုံးပွဲလေး ကြည့်လိုက်။ ခုပိတ်ရက်တွေမှာတော့ လျှော့ပင်းမောလ်တွေဆီ ကျွန်တော် ခြေဦးလှည့်နေတတ်တယ်ဗျ။ ရိုးလက်ဇ်လေး အမြင်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် သားသားနားနားလေး ဖြစ်ချင်၊ ရှိုးထုတ်ချင်နေတာပေါ့။ တကယ်တော့ ရိုးလက်ဇ်လေးက ကျွန်တော့်ကို သတိတောင်ထားမိရဲ့ လား မသိဘူး။ အို သူ့ ဘာသာ သတိထားမိမိ မမိမိ အပြတ်ရှိုင်းနေဖို့အဓိက။ ဒါမှ ရိုးလက်ဇ်လေး ခိုက်မှာ။ လည်ကတုံး အဖြူရောင်လေးက ဝါကျင်နေပြီ။ အသစ်ဝယ်ဦးမှပဲ။ ကချင်ပုဆိုး၊ ကတ္တီပါဖိနပ်လည်း ဟောင်းနေပြီ။ လည်ကတုံးက အရေးကြီးတယ် ကျန်တာတွေက နောက်လမှ ဝယ်လည်းရတယ်။ ဖိတ်ဖိတ်လက်နေတဲ့ နာရီဆိုင်ရှေ့ က ဖြတ်သွားတော့ ကျွန်တော့် မျက်စိထဲ ကပ်ညှိလာတာက ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိခ် ဘောလုံးသမားနဲ့ကြေငြာထားတဲ့ ရိုးလက်ဇ်နာရီ ကြေငြာဆိုင်းဘုတ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီဆိုင်ထဲ မယောင်မလည် ဈေးနှုန်းစုံးစမ်းဖို့ဝင်တယ်။ လစဉ်နည်းနည်းခြင်း စုသွားရင် ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်လောက်ဆို ဝယ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ ။
လှလိုက်တဲ့ နာရီတွေဗျာ။ အကုန်လုံး လှနေတာများ ခုခေတ် မိန်းကလေးတွေအတိုင်း။ ဘောလုံးသမားကြေငြာတဲ့ နာရီကိုရှာတာ မတွေ့ လို့အရောင်းစာရေးမလေးကို ဆိုင်းဘုတ်လက်ညှိုးထိုးပြပြီး အဲဒီနာရီ ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ ငတိမလေးက ခေါင်းအစခြေအဆုံး ကြည့်တဲ့အကြည့်က မဝယ်နိုင်ဘဲနဲ့ များဆိုတဲ့ အထာ။ ဝါရင့်အရောင်းစာရေးပီသစွာ အကြည့်ကို အမြန်ရုပ်သိမ်းလို့နောက်ဆုံးလိတ်တက်၊ လီမိတက်အက်ဒီရှင်းဆိုတဲ့အကြောင်း ချိုချိုသာသာ အပြုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်။ အရောင်းစာရေးမ အနားက ထွက်သွားတော့မှ ဈေးနှုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ အလိုလေး ဘုရားရေ ဈေးကြီးလိုက်တာ ကျွန်တော် တစ်နှစ်လုံး မစားမသောက်စုမှ ဒီနာရီမျိုး ဝယ်နိုင်မယ်။ ဒီလိုနာရီမျိုး ဝယ်တဲ့သူ ရှိသေးတယ်။ ဒီလောက် ဈေးကြီးပေးပတ်တော့ရော ဘယ်တွေထူးခြားမှာတုန်း။ တော်ပြီ တော်ပြီ နောက်နောင် ဘယ်တော့မှ မရိုးလက်ဇ်တော့ဘူး။
တနင်္လာနေ့ရုံးတက်တော့ လည်ကတုံးအသစ်ချပ်ကျွှတ်လေးနဲ့သားသားနားနား ကျွန်တော် အရင်လို ရိုးလက်ဇ်မလေး မမြင်တဲ့နေရာကနေ တိတ်တိတ်ကလေး မစောင့်ကြည့်တော့ဘူး။ ရိုးလက်ဇ် မြင်လောက်တဲ့ နေရာလောက်မှာ စောင့်တယ်။ ရိုးလက်ဇ် လာတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီ အင်္ကျီတွေ ဘာတွေဆွဲဆန့် ၊ ဆံပင်တွေ သပ်လို့ ရယ်ဒီ။ ဟော..ရိုးလက်ဇ် လာပြီ။ အနက်ရောင်မှာ အဖြူဘောလုံးစက် ဂါဝန်လေးနဲ့လှလိုက်တာ ရိုးလက်ဇ်ရယ်။ ဆံနွယ်လေးတွေ တလွင့်လွင့်နဲ့လွင့်မျှောလာတဲ့ မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ နတ်မိမယ်လေးပါပဲ။ ကိုယ့်အသည်းနှလုံးကို မင်းရဲ့ ယစ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်ချင်တယ်။ ရုတ်တရက် ရိုးလက်ဇ် လမ်းလျှောက်နေတာကနေ ရပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုများ မြင်သွားတာလား ဒိတ်ကနဲ ရင်ခုန်သွားတယ်။ လား..လား..ဘယ်ကအကောင်ပါလိမ့် ရိုးလက်ဇ်ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ပွေ့ ဖက်လိုက်တာ။ ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သွားသလိုပဲ။ ရဲကို ဖုန်းလှမ်းဆက် တိုင်ရမလား။ ဖုန်းထုတ်လိုက်ချိန်မှာပဲ ဟင်...ရိုးလက်ဇ်က အဲဒီကောင့်ကို ပြန်ဖက်လို့ပြုံးရယ်နေပါလား။
တနေရာမှာ ဝင်းကနဲ လက်သွားသလို ဖြစ်သွားလို့ကြည့်လိုက်တော့ မနေ့ က ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်လိတ်တက်လီမိတက်အက်ဒီရှင်း ဘောလုံးသမားကြေငြာတဲ့ နာရီက ဒီကောင့်လက်မှာ ငှားငှားစွင့်လို့ ။ သြော် ရိုးလက်ဇ်ချစ်သူက ရိုးလက်ဇ်နဲ့ ပါလား။ ရိုးလက်ဇ်နဲ့ဘယ်လိုမှ မလိုက်ဖက်လိုက်တာဗျာ နတ်မိမယ်နဲ့ဖားပြုတ်။ ၃၂ ချောင်းပေါ်အောင် ရယ်နေတာများ မြင်းကြီးကျလို့ ။ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေက ရုပ်ရည်ရူပကာ မရှိရှာတော့ အကောင်းစားတွေသုံးပြီး ရုပ်ထွက်အောင် ဖန်တီးရတော့ပေါ့ဗျာ။ အကောင်းစားတွေသုံးတိုင်း ရုပ်က ထွက်လာတာမှ မဟုတ်တာ။ ည တရေးနိုးလို့ဒီကောင့်ရုပ်ကို မြင်ရရင် လန့် အော်မိမယ်။ ရိုးလက်ဇ်က ဒီငနဲသားကို ဘာကြည့်ကြိုက်ပါလိမ့် ရုပ်ရည်ရူပကာကြောင့်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပိုက်ဆံကြောင့်လား အရည်အချင်းကြောင့်လား။ အို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုးလက်ဇ်နာရီပတ်တဲ့ကောင်တွေရော၊ အဲဒီကောင်ကို ကြိုက်တဲ့ကောင်မတွေရော၊ ရိုးလက်ဇ်နာရီကိုရော ဟွန့် ... အားလုံးကို အမြင်ကပ်တယ်...မုန်းတယ်။
ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၄။
Credit to https://soundcloud.com/linnith
April showers bring May flowers. ဆိုပေမဲ့ မေလ မရောက်ခင် ဧပရယ်လမှာပဲ ပန်းတွေ ဖူးပွင့်ကြတာ မေစီလျှော့ပင်းမောလ်မှာပါ။ အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ တိုင်း ရုံးချုပ်မှာ နေ့ လည်စာကျွှေးတာကို ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရမှာ ပျင်း၊ အပတ်တိုင်း တဆိုင်တည်းသောဆိုင်က အစားအသောက်တွေကိုပဲ ကျွှေး၊ စားပြီးရင် ရေငတ်၊ အကြောတက်လို့MSG အချိုမှုန့် ပါတယ်ထင်လို့အပတ်တိုင်း သွားမစားဖြစ်ဘူး။ ရုံးချုပ်မှာ မဖြစ်မနေ သောကြာနေ့နေ့ လည်စာ သွားစားတဲ့အခါ LGA (LaGuardia Airport လဂွာရီရာပရောဂျက်) မှာ အတူတွဲလုပ်ဖူး လက်ပေါက်ကပ်တဲ့ ဂျူးမကြီးက မေစီက နှင်းဆီဂါဝန်လေးက အရမ်းလှတာပဲ။ ဘဟီတာ အိန္ဒိယသူလေးကို သွားဖို့ တိုက်တွန်းနေလို့မေးကြည့်တော့ မေစီပန်းပြပွဲ ဆိုတာ သိရတယ်။
သွားကြည့်တော့ တကယ်လှတယ်။ ဒါနဲ့စနေနေ့ မှာ နောက်ထပ်တခေါက် ထပ်သွားတယ်။ ချယ်ရီပင်တွေ မတွေ့ တော့ဘူး။ ပန်းဒီဇိုင်နာတွေ သူ့ ရက်နဲ့ သူ အလှဆင်ပါတယ်။ နာရီဝက်တကြိမ်ကျ ဂိုက်က လေဆာလိုက်နဲ့ ထိုးပြကာ ပန်းတွေအကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ပန်းပွဲ လာတဲ့သူတွေ၊ ဒစ်စကောက်ချလို့လျှော့ပင်းကြသူတွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ပါတယ်။ မေစီရဲ့Secret Garden အလှကို ငေးမောကြရအောင်။
ပန်းတွေအများကြီးကို တနေရာတည်းမှာ တစုတစည်းတည်း တွေ့ လိုက်ရတော့ OMG ! That is amazing. Unbelievable ! တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ ဒစ်စကောင့်တွေချလို့ပန်းတွေကြည့်ရင်း လျှော့ပင်းတဲ့သူတွေရော၊ ဈေးမဝယ်ဘဲ ပန်းတွေလာကြည့်၊ ဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့သူတွေရော အားလုံးကို မေစီက ဝဲကမ်းပါတဲ့။ အရှေ့ ဖက်ကမ်းခြေ နယူးယောက်ပြည်နယ် နယူးယောက်မြို့ ၊ ပင်စယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ ၊ အနောက်မြောက်ဖက် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် ချီကာဂိုမြို့ ၊ မီနီဆိုးတားပြည်နယ် မီးနီးပိုလစ်မြို့ ၊ အနောက်ဖက် ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့မေစီလျှော့ပင်းမောလ်မှာ နှစ်စဉ်ဧပြီလတွေတိုင်း ကျင်းပတဲ့ The Secret Garden ပန်းပြပွဲက တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါဘဲ။ တော်တော်အကုန်အကျခံပြီး ပန်းဥယျာဉ်လုပ်ထားတာပဲ။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုသာ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှုဒါန်းလိုက်ရင်...။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က အဓိပတိလမ်းလို ကိုယ်တို့ တက္ကသိုလ်မှာလည်း တော်ဝင်လမ်း ရှိတယ်။ လမ်းမကြီးကနေ တော်တော်လေးဝင်ရလို့တော်ဝင်လမ်းလို့အမည်တွင်တာပါ။ အဲဒီတော်ဝင်လမ်းမ အလယ်ခေါင်မှာ "ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅ % မပြည့်လျှင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လုံးဝမပြု"ဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်ကြီး ချိတ်ထားတဲ့ ကုက္ကိုပင်ကြီးတပင် ထီးထီးကြီးရှိတယ်။ "အဓိပတိလမ်း မရှိပေမဲ့ တော်ဝင်လမ်းရှိတယ်...သစ်ပုတ်ပင် မရှိပေမဲ့ ကုက္ကိုပင်ရှိတယ်...အင်းလျားကန် မရှိပေမဲ့ သာဓုကန်ရှိတယ်...ဦးချစ်ဆိုင် မရှိပေမဲ့ အောင်ရှိတယ်...ကဲ..ဘာလိုသေးလဲ..."။ ကုိုယ့်သူငယ်ချင်းတယောက် ကျောင်း Address Book မှာ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေး။ ဘာလိုလိုနဲ့ကိုယ်တို့ ကျောင်းပြီးတာ ဆယ်နှစ်တောင် ရှိပါရောလား။ အချိန်ကုန်တာ မြန်လိုက်တာ..။
ကိုယ်တို့ အုပ်စုထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်တဲ့သူ မပါတော့ အတန်းလစ်ကြပြီဆိုရင် ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ကျောင်းထိပ်ကို တမျှော်တခေါ်ကြီး လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ကျောင်းဖယ်ရီတွေက နေပူကြဲကြဲ အရိပ်အာဝါသမရှိတဲ့ တော်ဝင်လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို လမ်းထိပ်အထိ ခေါ်သွားပေးတတ်တယ်။ နေကပူ၊ ဖယ်ရီကားကမကြုံ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားတစီးတလေများ ဖြတ်သွားရင် လမ်းကြူံလိုက်ဖို့ကိုယ့်အသိတွေများ ဖြစ်မလားလို့လှည့်ကြည့်ရတာ အမော။ မဟုတ်ရင် သက်ပြင်းကို ဟူးကနဲမှုတ်လို့ငါ့မှာသာ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိလို့ ကတော့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေကို တင်သွားမယ်လို့တယောက်ကပြောရင် အဲဒီအချိန်ဆို နင် တော်ဝင်လမ်းလျှောက်ရတဲ့ဒုက္ခကို မေ့နေတော့မှာ။ လမ်းကြုံခေါ်ဖို့ မပြောနဲ့ကားကို ဝူးခနဲနေအောင် မောင်းထွက်သွားမှာလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်။
ခရိုနီတစ်ယောက် ဒေါ်လာအုပ်လိုက်ကိုင်ပြီး မော်ဒယ်မလေးတွေနဲ့ကာရာအိုကေမှာ သုံးဖြုန်းနေတဲ့သတင်း ဖတ်ရတော့ ငါသာ သူ့ လိုချမ်းသာရင် ကာရာအိုကေမှာ သုံးပစ်မဲ့အစား လှုပစ်လိုက်မှာလို့တွေးမိတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်သာ ခရိုနီဖြစ်ခဲ့ရင် လှုဒါန်းဖို့ မေ့ပြီး အဲဒီလို သုံးဖြုန်းနေမလားဘဲ။ ခရိုနီမဖြစ်သေးတော့ မသိသေးပါ။ အသိအစ်မက သူ့ မွေးနေ့ မှာ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလှုမယ်၊ အားရင်လိုက်ခဲ့လေလို့ဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ယိုးဒယားဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်း Wat Buddha Thai Thavorn Vanaram ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းမှာရှိတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ လှုဖွယ်တွေယူ၊ ရေစက်ခွက်ချ ဘုရားစာရွတ်ဖတ်တာကို နားထောင်တော့ နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ကိုပဲ သုံးခါတိတိ လိုက်ဆိုနိုင်တယ်။ စာအိတ်နဲ့ ဝထ္ထုငွေကို လုံးဝအကပ်မခံဘူး အလှုခံဗုံးထဲသွားထည့်တဲ့။ နောက်တော့ ဆွမ်းဟင်းတွေကို မီးဖိုချောင်ကနေ ဆရာတော်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။ အမျိုးသားတွေကပဲ ဆွမ်းဟင်းတွေကို ဆရာတော့် သပိတ်ထဲ ကပ်ကြတယ်။ ဆရာတော်တွေက သပိတ်နဲ့ ပဲ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြတယ်။
ဝထ္ထုငွေကို ကပ္မိယကနေတဆင့် ကပ်ရပြီး သိမ်နားကနေ ဆွမ်းစားဆောင်ထိ ဆွမ်းခံကြွတာကို သပိတ်ထဲ ဆွမ်းဟင်းတွေ လောင်းလှုရတဲ့ မှော်ဘီဝါးနက်ချောင်း ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရကို သတိရမိတယ်။စားဖိုဆောင်မှာ ဟင်းတွေမှ အများကြီး။ ထိုင်းတွေက ဖော်ရွေတယ်။ နောက်နှစ်ပတ်မှာ ကျင်းပတဲ့ Songkarn ထိုင်းသင်္ကြန်မှာ ကားလမ်းမကို ပိတ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်၊ မော်ဒယ်ရှိုးပွဲတွေ ကျင်းပလို့လာလည်ဖို့ဖိတ်ပါတယ်။ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလည်း နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတွေရှိပေမဲ့ အဲဒီအချိန် ဝါရှင်တန်ဒီစီ ချယ်ရီပွဲတော်ဆီ ရောက်နေမှာမို့ထိုင်းသင်္ကြန် မကြုံလိုက်ဘူး။ အပေါ်ထပ်က မြဘုရားကျောင်းဆောင်ဆီ တက်ဖူးကြတယ်။ ထိုင်းဘုရားကျောင်းတွေထုံးစံအတိုင်း စလစ်မွှန်းချွှန်းတွေနဲ့လေက တဟူးဟူး အပေါ်ထပ်မှာ ပုရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ရွှတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတယ်။ Laughing Buddha ၊ မဟာပိန္နဲ၊ တရုတ်နတ်၊ ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ်ထုတွေရှိတယ်။ ဆုတောင်းပြည့်ရင် ဆင်ရုပ်နဲ့ ကြက်ဥ လာလှုကြလို့ ဆုတောင်းပြည့်သွားသူတွေရဲ့ဆင်ရုပ်လေးတွေ တွေ့ ရပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ဆုတစ်ခု တောင်းခဲ့တယ်။ ဆုတောင်းပြည့်ရင် ထုံးစံအတိုင်း ဆင်ရုပ်နဲ့ကြက်ဥ သွားလှုဦးမယ်။
ကို်ယ့်လိုပဲ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်း မရောက်ဖူးသေးလို့ လိုက်တဲ့ ကြီးကြီး၊ ဘဘတို့ နဲ့အလ္လာဘသလာဘ ပြောကြတော့ သာယာဝတီသုံးဆယ်ကတဲ့။ ဒါဆို မကြီးသူဋ္ဌေးကိုများ သိမလားမေးကြည့်တော့ မသိဘဲဘယ်နေပါ့မလဲ တလမ်းတည်းနေတာတဲ့။ သူတို့ သမီးအငယ်ဆုံးက အန်ဂျီအိုမှာ လုပ်နေတာ၊ ဘယ်တက္ကသိုလ်ထွက်လဲ၊ ဆယ်တန်းဘယ်နှစ်အောင်တာလဲ မေးမြန်းကြည့်တော့ လား..လား...ပထမနှစ်တုန်းက တလလောက် အတူတူထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသားဖြူဖြူ၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်ပိုင်ရှင် ရွှေဇင် ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်က အဲဒီတုန်းက လန်ဒန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုက လာဖွင့်တဲ့ ပထမနှစ်ဒီပလိုမာသင်တန်းတက်နေတော့ ကျောင်းသိပ်မတက်ဖြစ်ဘူး။
သွားတက်တဲ့ တလလောက်က အတူတူထိုင်တာက အဲဒီဆံပင်ရှည်မလေး ရွှေဇင်၊ ကျောင်းသိပ်မလာတဲ့ ငါ့ကို ဘာလို့ အီးစီခန့် ကြပါလိမ်လို့ ဆိုတဲ့ ခပ်ဟော့ဟော့ ဝတ်တတ်တဲ့ ထက်ထက်ခိုင် ခုတော့ သြဇီ ရောက်နေတယ် ကြားတယ်၊ အသားဖြူဖြူထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဘူတာရုံလမ်းနားက လေးလေးခိုင်၊ အသားညိုညို ရခိုင်မလေး မြရည်ညို (အဲဒီနာမည်ကို သိပ်သဘောကျတာ)၊ ခင်ခင်ဝင်း အဲဒီတစ်ယောက် နာမည်ကို ရင်းနှီးနေပေမဲ့ ခုထိမျက်စိထဲ မမြင်သေးဘူး။ အစပိုင်းကတော့ ကျောင်းတက်မလိုနဲ့နောက်တော့ လန်ဒန်ကျောင်းကိုပဲ ကေအမ်ဒီမှာ တက်ရတယ်။ ဒုတိယနှစ်ကျတော့ ရိုးကော ကျောင်းခေါ်ချိန်တွေ ခိုးထိုးပေးလို့ မရတော့ ဒုတိယနှစ်ကျပဲ ကျောင်းတကယ်တက်ဖြစ်တော့တယ်။ ရွှေစင်တို့ အုပ်စုနဲ့အခန်းမတူတော့သလို ဝေ၊ အိကေ၊ အေးသက်လှိုင်၊ မြတ်မွန်၊ သစ်သစ်၊ သဇင်၊ ခိုင်ဇာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရပြီး သူတို့ နဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ တတွဲတွဲ။ ရွှေစင်တို့ အုပ်စုက ပထမနှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ တတွဲတွဲ ခုထိလည်း တွဲတုန်း။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရောက်နေတဲ့ ခင်ခင်ဝင်းက နယူးယောက်က ရွှေစင့်အဖေ၊ အဖေတို့ ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး နေကောင်းလားလို့သတင်းမေးတာ ကြားရတော့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် နွေးထွေးတာပဲလို့တွေးမိတယ်။
ချစ်ကွန်းကို သိလား သမီးတို့ ထက် ငယ်တယ်၊ တော်တယ်၊ ကွန်ပျူတာကပဲလေ၊ ခု စင်္ကာပူမှာလို့ ပြောတော့ သိဘူးလို့ ။ နောက်မှ ကေအမ်ဒီမှာ သီဟန်တို့စူပါဗိုက်ဆာ၊ ရွှေစင့်ဦးလေး (ဦးလေးဆိုပေမဲ့ တူမထက် ငယ်တယ်) ဆိုတာ သတိရသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုဖိတ်တဲ့အစ်မက မကြီးငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ဆေးဖက်ကျွှမ်းကျင်တက္ကသိုလ်မှာ တဆောင်တည်းနေပြီး ကျောင်းအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းညီအစ်မတွေ။ မကြီးနဲ့သူ့ ငယ်သူငယ်ချင်းက သူငယ်တန်းကနေ ရှစ်တန်းအထိ ဟိုင်းကြီးကျောင်း၊ ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်းကို ပုသိမ် ထ ၂ ကို အတူနေ အတူတက်ခဲ့တာ။ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ်တွေ မတူပေမဲ့လည်း တရွာတည်းသားတွေဆိုတော့ ဆွေမျိုးလိုပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ အဲဒီလို ငယ်သူငယ်ချင်း မရှိဘူး။ မကြီးငယ်သူငယ်ချင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့လည်း သိနေတာပေါ့။ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကြာမှ နယူးယောက်မှာ ပြန်ဆုံတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်လို စောင့်ရှောက်တယ်။
နယူးယောက်က နာမည်ကြီးဘလော့ဂါနဲ့ ဘယ်လိုသိတာတုန်း။ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရရေးတော့ ဖေ့ဘွတ်ကဘလော့ဂါစာရင်းမှာပါဖို့ဖိတ်ခေါ်လို့ သိတာ။ ငါလည်း ဘလော့ရေးတယ် --- နာမည်နဲ့ ။ ဟင် ဟုတ်လား သမီးက ဘလော့သိပ်မဂင်းလို့သိပ်မသိဘူး။ သူနဲ့ငါက အိုင်အလ်ဘီစီမှာ အင်္ဂလိပ်စာတက်ကတည်းက သူငယ်ချင်း၊ ငါ နယူးယောက်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး သူလည်း ရောက်လာတာပဲ။ ဟိုးတလောက မီးပြတိုက်ကို သွားတုန်းကတောင် သူပါတယ်။ ဒါနဲ့နေပါဦး ကြည်ကြည်စိမ်းနဲ့မေဝါလွင်ကို ဘယ်လိုသိတာတုန်း။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် ဒီပလိုမာသင်တန်း အိုင်ဒီစီအက်စ် IDCS (International Diploma in Computer Studies) Section 13 ကေအမ်ဒီမှာ တက်တုန်းက တခန်းတည်း အတူတူတက်ခဲ့တာ။ အဲဒါ့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ အိမ်က ငါ့စားအိမ်သောက်အိမ်ပဲ။ အဲဒီနေ့ က ကမ္ဘာကြီးဟာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါလားလို့သဘောပေါက်သွားတယ်။
နယူးယောက်မြေအောက်ရထားလိုင်က တနေ့ ကို လူသန်းချီ သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးနေတော့ အလွန်ရှုပ်သလို ပြုပြင်ရတာလည်း များတယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆို ရထားလမ်းပြင်နေလို့ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်နေရာအထိ ရထားမရှိဘူး၊ ဖရီးရှယ်တယ် စီးရင်စီး၊ မစီးရင် တခြားရထား ပြောင်းစီးရတယ်။ ရှေ့ မှာ လမ်းပြင်နေလို့ဒီဘူတာက နောက်ဆုံးပါ...အောက်ရထားလိုင်းကို ပြောင်းစီးပါလို့ကြေငြာရင် ပြောင်းရပြန်ရော။ ရထားမြေပုံကို ဖုန်း၊ အိုင်ပတ်မှာ ဆောင်ထားရတယ်။ E ရထားစီးနေရင်း ဒီရထားက F လိုင်းက သွားမှာပါလို့ကြေငြာရင် မြေပုံထုတ်၊ ဘယ်ဘူတာမှာ ဆင်းရမလဲ၊ ဘယ်ရထားထပ်ပြောင်းစီးရင် သွားမဲ့နေရာ ရောက်မလဲ၊ Local ( ဘူတာစဉ်တိုင်းရပ်တဲ့ရထား) စီးနေရင်း ခုရထားက Express ( ဘူတာကြီးတွေပဲရပ်တဲ့ရထား) လို့ ကြေငြာရင် ပြန်ပြောင်းစီး။ နယူးယောက်ရထားဋီကာတွေကို စာဖွဲ့ ရရင် ပို့ စ်တစ်ခု ရမယ်။
ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်ဆိုရင် တခါတလေ တံခါးပိတ်လို့ မရဘူး။ လူတွေ ဒီလောက်ကျပ်နေတာတောင် နောက်မကျချင်တဲ့သူတွေက အတင်းတက်ကြတာကိုး။ တံခါးအားလုံးပိတ်လို့ မရရင် ရထားက မထွက်နိုင်။ ဒီတော့ ဒီလေး delay ဖြစ်။ ရထားမောင်းတဲ့သူက စိတ်တို Use all available doors. Stand clear closing door. If you block the door, the train can't move. If there is no room, please wait for next train, right behind us. လို့ အော် တံခါးကိုဆောင့်ပိတ်။ နယူးယောက်မြေအောက်ရထားမောင်းတဲ့သူတွေ အော်ဟစ်တာ ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားစပယ်ရာတွေနဲ့ တူတယ်။ ရန်ကုန်က ဘတ်စ်ကားစပယ်ရာတွေလို မိန်းကလေးကို ခါးမပွေ့ ချီတာတစ်ခုပဲ။ တချို့ ရထားမောင်းတဲ့သူတွေက သဘောကောင်းတယ် အသံလေးက ချိုနေတာပဲ Express ရထားက ဘယ်နှစ်မိနစ်ဆိုရင် ရောက်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီဘူတာကနေ ဘယ်ရထားလိုင်းတွေ ပြောင်းစီးလို့ ရတယ်ဆိုတာက ကြေငြာတယ်။ တချို့ ကျတော့လည်း လှုရွှင်တော်အသံနဲ့အသံကြားတာနဲ့ပြုံးမိတယ်။
မနက် ၈ နာရီခွဲ ရုံးတက် ည ၇ နာရီ မှ ရုံးပြန်ရတာ နှစ်ပတ်ရှိပြီ။ အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ဆို ရထားမှာ လူရှင်းနေတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေက မိုးရွာနေတယ်။ Dear passengers, there isabig rainbow on the right side. လို့ရထားမောင်းတဲ့သူက ကြေငြာတော့ ရထားပြတင်းပေါက်ကနေ ကောင်းကင်ကို အားလုံး လှမ်းကြည့်ကြတယ်။ လှလိုက်တဲ့ သက်တန့် လေး။ သက်တန့် မတွေ့ ရတာတောင် တော်တော်ကြာပြီ။ နောက်ဆုံးတွေ့ ခဲ့တာ ၂၀၁၃ မေ မန်မိုရီယမ်ဒေးပိတ်ရက် နိုင်အာဂရာရေတံခွန်မှာ။ ကောင်းကင်ဆီကနေ မဟုတ်ဘဲ ရေတံခွန်နားမှာ သုံးခုတွေ့ ခဲ့တာ။
နိုင်အာဂရာရေတံခွန်နားမှာ အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကို ပေါင်းကူးထားတဲ့ တံတားက Rainbow Bridge တဲ့။ သက်တန့် ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဆောက်ထားတာမို့ လို့အဲဒီနာမည်ပေးတာတဲ့။ နိုင်အာဂရာသွားတုန်းက သတိမထားမိဘူး။ ဟိုတပတ်စနေနေ့ က လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့မက်ဟန်တန်နဲ့ ကွင်းကြားက ရုစဗဲ့အိုင်လန်ကျွှန်းကိုသွားရင်း renowned Japanese-American sculptor, landscape architect, and designer Isamu Noguchhi နာမည်ကျော် ဂျပန်အမေရိကန် ပန်းပု၊ အာခိတက်၊ ဒီဇိုင်နာ နာဂူချီပြတိုက်ကို သွားလို့ဒီဇိုင်းစာအုပ်ကို ဟိုလှန်ဒီလှန်ကြည့်ရင်း တွေ့ ခဲ့တာ။ တံတားအများစုက ထောက်တိုင်တွေ ရှိပေမဲ့သက်တန့် တံတားမှာ မရှိဘူး။ သက်တန့် လေးလို ကွေးကွေးခုံးခုံးလေးနဲ့အင်မတန်လှတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့မှ သတိထားမိတယ် လှသား။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းက Handerson Wave တံတားကလည်း လှိုင်းသဏ္ဌန်ဆောက်ထားတာ လှတယ်။
Rainbow Bridge between Canada (left side) and USA (right side)
credit to TravelerFolio.com
သဘာဝအလှတရားကို ခံစားတတ်တဲ့ ရထားမောင်းသူလိုပဲ ကောင်းကင်မှာ သက်တန့် လေး တွေ့ ခဲ့ရင် မမြင်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေကို အသိပေးလိုက်ပါ။ စိုးရိမ်သောကဗျာပါဒတွေ ကင်းစင်းပြီး သက်တန့် ကြည့်နေတဲ့အခိုက်အတန့် လေးမှာ စိတ်ကြည်နူးရတယ်မလား။ နယူးယောက်တခွင် ဖလမ်းဖလမ်း ဂျလမ်းဂျလမ်းသမျှကို နောက်အပတ်မှ ဆက်ရအောင်။
မေ ၁၅၊ ၂၀၁၄။